Qoys soomaali ah oo qaabilay dhallaan kelinimo ku yimid - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Fida Hossein oo qoys soomaali ah la degan. sawir: Mona Ismail Jama
Qoys soomaali ah oo qaabilay dhallaan kelinimo ku yimid
Fida:"Soomaalida waan jecelahay"
La daabacay torsdag 24 november 2016 kl 07.00
Idaacadda Raadiyaha Iswiidhan ayaa todobaadkan iyo ka dambe idin soo gudbin doonta xaaladda dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada. Barnaamijka maanta ayaa ku saabsan Fida Hossein oo ah da´da 17 jir. Wuxuu la deganyahay qoys soomaali ah.
Waxaan ku suganahay magaalada Vänersborg oo ku taala konfuur galbeedka Iswiidhan. Saacadu wexeey ku beegantahay 6 galabnimo. Raxma Mohamed ayaa dhowaan ka soo rawaxday shaqada. Wexey ka mid tahay qoysaska albaabada u furay caruuraha waddanka kelinimada ku yimaada.
Fida Hossein ayaa ah da´da 17 jir. Wuxuu keli ku yimid Iswiidhan si uu nolol cusub u bilaabo. Asal ahaan wuxuu u dhashay waddanka Afqaanistaan. Reerkiisii wexeey hadda ku suganyihiin Bagistaan halkey sagaalki sanno ee ugu dambeeyay deganaayeen.
Reerka Fida ayaa ka tirsan dadka loo yaqaano Hazari(Hazara) kuwan oo muddo dheer lugu cadaadinayay waddanka Afqanistaan, madama ay ka mid yihiin muslimiinta shiicada ah.
– Kuma laaban karo Afqaanistaan amba Baagistaan. Waa isku mid. Labada waddan ba waxaa lugu dila dadka hazaarada ah.
Marka uu waddankiisi soo xasuusto waxaa maskaxdiisa ku soo dhaca dagaal, dil, iyo qarax bam.
Aad ayuu ugu faraxsanyahay in uu Iswiidhan yimid.
– Heeyada socdaalka wax kasta ayey i siisay, guri, cunto iyo lacag. Khatartii aan ka soo baxsaday kama jirto Yurub. Raxma si wanaagsan ayey ii qaabishay waa hooyadeey oo kale. Waxaan ugu yeedha ”Aya”oo afkeeyga ka dhigan hooyo.
Balse sidee ayey isku fahmaan Raxma iyo Fida? Raxma wexeey ku dhalatay soomaaliya halkey ka soo qaxday 1990:kii. Af- soomaali ayey ku hadasha marka ay joogto guriga halka uu Fida ingiriisi iyo iswiidish aan badneeyn ku hadlo.
– Soomaaligu waa luuqad aad u adag, waxaan isku darnaa ingiriisii iyo iswiidhish. Marka aan is fahmi weeyno na gacmaha ayaan ku hadalna, ayuu sheegay Fida Hossein.
-Sannadkii aan la degeena Raxma iyo caruurteeda waxaan yara bartay ereyo soomaali ah, sida wallaahi billaahi iyo tallaahi, maalin aan maqlin ereyadaas ma jirto, ayuu sheegay Fida Hossein inta uu qoslay.